adhd - Nkuzi Cognitive
Tag Archives maka: "adhd"
Here nọ ebe a: Home » adhd
Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite na ntụleghachi ọmụmụ ha?
ADHD afọ 20 mgbe nchọpụta nchoputa. Nsonaazụ ya na nnata ego
Nsonaazụ nke ADHD na arụmọrụ ụlọ akwụkwọ
Na-emeso ADHD na "egwuregwu vidiyo"
ADHD, ncheta ihe na ịla n’iyi
Mgbanwe nke ADHD. Kedu ihe gbanwechara mgbe afọ asaa gachara?
Attmụaka na-adịghị echebara onwe ha echiche na ọzụzụ: ọzụzụ ndị nne na nna
Nyocha: ADHD NA OMElọ. Ngwaọrụ na usoro maka ụmụaka nwere atụmatụ, nhazi na ihe isi ike
Nkpali na njide onwe onye - Nyocha ahụ